ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စမ်း မကြည့်သင့်သည့်အရာ”
ချာလီအန် အိန်ဂျယ်လဲ ဟက်တက်ကွဲ
ပြည်သူ့အတွက် ကျုပ်တို့ ဗီလိန်အဖြစ်ခံ၊အပြောဆိုခံ ၀င်တာပါ ဆိုသူ လူအတွေလဲ ပက်လက်လဲ။
ညအိပ်ရာဝင်တော့ အမတ်မင်း၊ မနက်မိုးလင်းတော့ ဒုံရင်း။
ဒီကြားထဲ ရင်မအေးရတာ၊မှတ်ပုံတင်ကြေး ထိုအကြွေး။
ကျုပ်တို့တွေကလဲ သိသိနဲ့ မနေနိုင်၊ ပွဲခင်းဝင် မတ်တတ်ငေး။ နောက်ဆုံးတော့ ဇာတ်သိမ်းကို သိရက် ၀င်ကြည့်မိတဲ့ပွဲ၊ အကုသိုလ်ပွား ဒေါသထွက်ရတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။
အဟား. ကိုပေါရေ.. ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်ထဲမှာ ခင်ဗျားရဲ့ မသာအိမ်ကဖဲဝိုင်း ကဗျာပါ ထည့်လိုက်အုံး။ အဟုတ်ကို တကယ့်ကို လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ကွက်တိကျလွန်းလို့ဗျာ..။
ကျုပ်ကတော့ အဲဒီလူအတွေကို သနားလဲ တကယ်သနားတယ်။ အရှက်လုံးဝမရှိမှန်းသိပေမယ့် ဒီလောက်တောင် ဗြောင်ကျလွန်းသူတွေနဲ့ သူတို့ကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခိုးဝှက်ပေးကြတဲ့ နိုင်ငံသားအချင်းချင်းလဲ စိတ်ကုန်ပြီ။
thanks, ko paw.
အခြေနေ အချိန်ခါလိုက် ပုံတိုပတ်စတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ ကာတွန်းတွေ တင်ပေးတဲ့ ကိုပေါ ဒီတခါ အတော်ဆုံးပဲလို့ ကျမထင်ပါတယ်။
ဟဟ.. ဦးပေါ ၊ ကျော်ထင်၊ မိုးမိုးနဲ့ ဒီမိုငတုံးတွေ။ နအဖကို မင်းတို့ကျေးဇူးတင်ရမှာကွ။ အရင်တုံးကဆိုရင် နအဖပဲ စောက်တင်းစောက်ဖျင်းတွေပြောခွင့်ရှိတာ။ အခုဆိုရင် NDF ကိုလဲ အတင်းအဖျင်းပြောခွင့်ရပြီလေ။ မင်းတို့အဆင့်က မိမိနဲ့ သဘောထားချင်းမတူဘူးဆိုရင် စောက်တင်းပြောဖို့ပဲသိတာမဟုတ်လား? သနားတယ်ကွာ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့မင်းတို့တွေ နေ၀င်ချိန်ရောက်ပြီနော်. . မင်းတို့ကောင်တွေ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဆန့်ကျင်တုံးက လူတွေများခဲ့တယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးမှာ အရမ်းနည်းသွားပြီ။ နောက်ဆိုရင် မင်းတို့ကောင်တွေကို ခွေးတစ်ကောင်ကတောင် ထောက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီနေရာမှာတော့.. ကိုပေါက ညစ်ခံရမှန်းသိသိကြီးနဲ့ ဝင်တာ ခံရတာတောင်နည်းသေးတယ် ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးနဲ့ ပျော်နေတဲ့ပုံပဲ.. ဂရုဏာဒေါသော လေသံ လုံးဝ မပေါက်တဲ့ပုံပဲ... ဒါပေမယ့် အဘဦးဝင်တင်က "NLD အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ခဲ့ပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် သူတို့မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူမိကြောင်းနဲ့ ဒီ့အတွက် အရေးယူ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်း NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်က မဇ္ဈိကို ပြောပါတယ်။" ပြောခဲ့တယ်.. ကိုပေါလို လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးမနေပါဘူး.. ဆိုလိုချင်တာတော့ တချို့ အခွင့်အရေးသမားက လွဲလို့ နိုင်ငံအတွက် တကယ်များအခွင်အလမ်းများ ရလာမလားဆိုပြီး အခက်အခဲတွေကြားက ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဒီလို ရေနစ်နေသူတွေကို ဝါးကူမထိုးသင့်ပါဘူး.. အဘဦးဝင်တင်လိုပဲ သဘောထားသင့်ပါတယ်.. ကိုပေါ်ရဲ့ ပိုစ်အတော်များများကို ကြိုက်ပါတယ်.. ဒီတစ်ခုတော့ အမြင်မတူနိုင်ပါ..
I LIKE OAKAR COMMENTS.
ဥက္ကာ.... ပျော်တာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလူတွေ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းဟာ မမှန်ပါဘူးဆိုတာ ထင်ရှားလာဖို့ သိပ်မစောင့်လိုက်ရတဲ့အတွက်ပါပဲ။ ဒီပွဲမှာ တတိယအုပ်စု၊ အီးဂရက်စ် ဆိုပြီး ကျယ်လောင်ကျယ်လောင် လုပ်လာတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ကပ်မြှောင်ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတွေလည်း မြောင်းထဲရောက်သွားတဲ့ ပွဲပါပဲ။
အဘ ဦးဝင်းတင်လည်း ပါးစပ်ကသာ တိုက်ရိုက်ထုတ်မပြောတာ။ ကျနော့်နည်းတူ ဝမ်းမြောက်နေဟန်တူပါတယ်။း-)
Thx for sharing U Win Tin interview Link ...
ကိုပေါကိုလည်း ထောက်ခံနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီသခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာဆိုတဲ့ကောင်က ဘယ်လို မိဘက ပေါက်ဖွားတဲ့ကောင်လဲမသိပါဘူး၊ အမှန်ကတော့ အဖက်လုပ်ပြီး ပြောဖို့သင့်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် နေရာတကာမှာ အလကားနေအလကား ၀င်ပါနေတဲ့ကောင်ပဲ၊ အလကား အကျိုးမရှိကောင်ပဲ၊ ကိုယ့်ဘာကို ရှက်ဖို့သင့်တယ်။ ကုလားမုန်းတီးရေးဖြစ်ရ အောင် ဒီကောင့်ညီမတွေ အမေတွေကို ကုလားတွေက ဘာလုပ်ခဲ့လဲမသိပါဘူး။ အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ။ မရှိတာထက် မသိတာခက်တယ်။ ကိုယ့်ဘာကို ဘယ်လို အဆင့်အတန်းထဲကို ရောက်နေတယ်ရောမင်းသိရဲ့လားကွာ။ မင်းကို မွေးထားတဲ့မိဘများသိရင် ရင်နာမှာ ဒို့ဗမာသောက်ပေါရဲ့ ...
anyway, thanks to those who participate in election, because of them we can see clearly how election turned out...." dirty and shameful"
In that case, we should also thank Na-Ah-Pha for giving those partiesachance to participate in this incredible election and also giving usachance to thank those who participated in this election.;))
ဇော်မျိူး သောက်ရူး မသေ သေးဘူး
Dear KP, appreciate ur keeping to allow anybdy to participate in comments bt shouldn'tbunlimitted to such guy like Zaw Myo that will fad up to majority of ur blog viewre.It's just my own pt of view.
ဦးဏှောက်မရှိပဲ အတင်းအဖျင်းပဲပြောတဲ့ ဒီမိုငတုံးများ
မင်းတို့ ဒီမိုတွေက ဦးဏှောက်လုံးဝမရှိပဲ . . အမြင်မတူတဲ့သူတွေကို ဖိနှိပ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်ကြတယ်။ မိမိလက်အောက်မှ ရှိတဲ့ အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမိန့်ကို နာခံရပြီး လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ကြောက်နေရတဲ့ သူကတော့ NLD ဥက္ကဌ ရာထူးယူထားတဲ့ ဦးအောင်ရွေပါပဲ။ NLD မှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စမှာ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးအောင်ရွှေခမျာ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးစုံ လုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စည်းကမ်းနဲ့အညီ ဥက္ကဌတစ်ယောက်ရဲ့ လေးစားမှု မခံရဘူး။ ပါတီတွင်းမှာ ဂိုဏ်းဖွဲ့ထားတဲ့လူတွေက ဥက္ကဌကို ခွေးတစ်ကောင်လို သဘောထားပြီး ပြုမူခဲ့တယ်။ ( သူကိုမကြိုက်ရင် ဥက္ကဌရာထူးကနေ ဖယ်ရှားပါ။ ဥက္ကဖြစ်နေရင်တော့ သူ့ရာထူးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လေးစားမှုကိုပေးရမှာပဲ။ သူရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ခံယူကြရမှာပဲ။ ခင်ဗျားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်မှန်ရင် သူ့နေရာမှာ စာနာကြည့်ကြပါ)
NLD မှတ်ပုံတင်ရေး ဆန္ဒမဲပေးရာမှာ ခြိမ်းချောက်မှုတွေလုပ်ပြီး ဗြောင်မဲ ပေးခိုင်းတယ်။ တကယ်ဆိုရင် အဲလိုအခြေအနေမှာ လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းနဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပေးရမှာပါ။ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ထောက်ခံမဲပေးရင် တိုက်ခိုက်ခံရမှာကို စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မှု လုပ်နိုင်တော့မှလဲ? အဲလိုလူဆိုးလူမိုက်တွေ လွှမ်းမိုးနေပြီး အနိုင်ကျင့်လိုတဲ့ သူတွေရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဟာ တိုင်းပြည်ကို မအုပ်ချုပ်သင့်ဘူး။ ဒီမိုဘလော့တွေဟာ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်မပေးသလိုပဲ .. . ဒီမိုငတုံးတွေဟာလဲ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ် ပြောဆိုတဲ့ လူ့ဘောင်ကို မလိုလားတဲ့သူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။
NDF က ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေလာခဲ့သူတွေပါ။ ဘေးထိုင်ဘုပြောမလုပ်ပဲ တကယ်ကို ဖာသည်မဗိုလ်ချုပ်တွေကို တော်လှန်ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေပါ။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလဲ . . . . . ဒီမိုငတုံးတွေ ဦးဏှောက်မရှိတာကို သိလို့ လမ်းခွဲပြီး . . . ကြံ့ဖွတ်အဏာမရအောင် သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ ရယ်စရာကောင်းတာကတော့ . . . . ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ်အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသွားတော့ ပျော်ရွှင်သူတွေက စစ်ဗိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုငတုံးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြောသလို မလုပ်ရလေသလားဆိုပြီး NDF ခံလိုက်ရတာကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းသာပီတိဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒီမိုငတုံးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဟာ အရမ်းကို ကလေးဆန်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကင်းမဲ့ပြီး အောက်တန်းစားတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနဲ့သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ စိတ်ထား သိမ်ဖျင်းပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ ဒီမိုတွေ အဏာမရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဖာသည်မဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဦးဏှောက်မရှိသည့် အောက်တန်းစား ဒီမိုငတုံးများကိုသောက်မြင်ကပ်တဲ့
p.s. NDFလို ကြံဖွတ်အဏာမရအောင် ကြိုးစားသူတွေကိုတော့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကြပေမယ့် . . . . ကြံဖွတ်အဏာရအောင် တက်တက်ကြွကြွ ကူညီနေသော ပလီဆရာတွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့ဖို့အတွက် ယခုအချိန်အထိ လှုပ်ရှားမှု မစသေးပါ။ ဒီမိုကုလားတွေကလဲ သူတို့ ကုလားအချင်းချင်း နှာစေးနေသည်။
သူငယ်ချင်းရဲ့ FB က ဟာလေးသဘောကျတာနဲ့ မျှဝေလိုက်တယ်
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ၏ အံ့ဘွယ် (၇) ပါး
၁။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာအော င်ရေးဆွဲခဲ့ရသည် ။ သို့သော်လဲ ၁၅ နှစ်ကြာအောင် ရေးဆွဲခဲ့ရသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှုများနှင့်သာ ပြည့်နေသည်။
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှုများနှင့်သာ ပြည့်နေသည်။ သို့သော်လဲ ပြည်သူပြည်သား ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ထောက်ခံသည်ဟုဆို သည်။
၃။ ပြည်သူပြည်သား ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ထောက်ခံသည်။ သို့သော်လဲ လက်ရှိစစ်အစိုးရ ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ တစ်ယောက်မှမရှိ။
၄။ လက်ရှိစစ်အစိုးရ ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ တစ်ယောက်မှမရှိ။ သို့သော်လဲ ကြံ့ဖွံပါတီဝင် ၁၆ သန်းကျော်ရှိသည် ဟုဆိုသည်။
၅။ ကြံ့ဖွံပါတီဝင် ၁၆ သန်းကျော်ရှိသည် ။ သို့သော်လဲ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကြံ့ဖွံပါတီကို မဲပေးသူမရှိ။
၆။ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကြံ့ဖွံပါတီကို မဲပေးသူမရှိ။ သို့သော်လဲ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကြံ့ဖွံပါတီမှ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသည်။
၇။ ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကြံ့ဖွံပါတီမှ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသည်။ သို့သော်လဲ ကြံ့ဖွံပါတီ ရွေးကောက်ပွဲနို င်တာကို တစ်ကမ္ဘာလုံး အသိအမှတ်မပြု။ ﻿
ဟို စောက်ပေါ ဇော်မျိုး -ငါ့လီးစားမလား-
ကုလားကသူ့ ဖင်ကိ်ုချခဲ့ ဘူးလို့ ကုလားမုန်းတီးနေတာ
ဟေ့ကောင် စောက်ပေါ ဇော်မျိုး မင်းကွန်မန်မရေးနဲ့ တော့
ကိုပေါ ဘလော့ သနာတယ်ဟေ့- ကြားလား-
(ကုလားကသူ့ ဖင်ကိ်ုချခဲ့ ဘူးလို့ ကုလားမုန်းတီးနေတာ နေမှာပေါ့)
ငါရေးတာ ကုလားအကြောင်းပါဘူး။ NLD ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရွှေကို လေးစားဖို့နဲ့ NDF က လူတွေကို မစော်ကားဖို့ ပြောထားတာပါ။ ဘာလို့ မင်းက ကုလားအကြောင်းပြောနေတာလဲ? သြော်.. အခုမှကြည့်မိတယ်။ အောက်မှာ ကုလားအကြောင်း စာလေးတစ်ကြောင်း ပါသွားတာကိုး။ မင်းတို့က အဖြစ်ကို သဲလွန်းတယ်။ ဟိဟိ.. စာရေးတဲ့ငါကတောင် ကုလားအကြောင်းရေးလိုက်တာ သတိမထားမိဘူး။ ငါရေးတာ စာလေးက တစ်ကြောင်းတဲပါ။ မင်းတို့က ကုလားထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံတွေဆိုတော့ အဲဒီစာကြောင်းလေးကို သွားမြင်တာကိုး။ ကုလားက မင်းပထွေးမိုလို့ ကုလားကို ထိရင်ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေတာထင်ပါ့။ ဟဲဟဲ.. ဒါကြောင့် ကြံ့ဖွတ်အမာခံတွေ စည်းရုံးပေးတဲ့ မင်းတို့ ပထွေး ပလီဆရာတွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို အနောက်ဖက်ကနေ မနှင်ထုတ်ကြတာကိုး။ ၀ါးဟားဟား… ဖြစ်ရပလေ. .ဒီမိုငတုံးတွေရယ်။ ကုလားထိ ဓါးကြည့်ဆိုတာ ဒီမိုငတုံးတွေကို ပြောတာကိုး. . .၀ါးဟားဟား။
အမည်မသိရဲ့ November 13, 2010 6:39 AM ကွန်.မန်.က အလွန်ရိုင်းပျလှပါသည် ၊ ကိုပေါမှ ဖျက်ပေးစေလိုပါသည်၊ ဘလော့ဂါပိုင်ရှင်ကို မြှောက်ပင့်ပြီး အခြားကွန်မန်.ရေးသူကို စော်ကားသည့် ကွန်မန်.ကိုတင်ထားပေးပါက တရားမျှတမူမရှိဟုထင်မိပါသည် ၊
ဖြစ်နိုင်ရင် ဇော်မျိုးနဲ့သေချာ စကားပြောဘူးခြင်တယ်... ဒီမိုတွေ ပြောတာတွေဟာ.. သိပ်ကလေးကလားတွေ ဆိုတာလဲ မမြင်ခြင် အဆုံးဖြစ်လာနေပြီ.... ဇော်မျိုးပြောတာတွေကို သေချာဖတ်သင့်ပြီလုို့ ထင်လာတယ်.... စိတ်ရှင်းရှင်း မထားပဲ မဲမဲမြင်ရာ ဝိုင်းခွပ်.. ဝါဝါမြင်ရာ ဝိုင်းရှိခိုးနေကြတဲ့ မြန်မာတွေ ဖြစ်နေသလိုပဲ.. ပါးစပ်ခဏပိတ်ပြီး စာဖတ်ကြသင့်ပါပြီ....
သူ ရ said...
ကျနော် လည်း မငယ်နိုင် ဘလော့ မှာ ဇော် မျိုးကို လိုက် ကာ ကွယ် နေ ရတယ်...လူ တွေ က ဇော် မျိုးရိုင်း တာပဲ မြင်တယ်...သူ့ မှာထူး ခြား တဲ့အ တွေး ရှိ တယ် ဆို တာမ မြင် ကြ ဘူး....သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ် အ မှန် က မဟုတ် မ ခံ ...တရားမျှတမှူ ကို လို လား ပုံ ရတယ်..He is quite unique.....NDF ရှံးတာ ကို ၀ိုင်း ၀မ်း သာ ကြ တာ ကျနော် ခု ထိ နား မလည် ပါ ...NDF ရှူံးတာ ကို ၀မ်း သာ သင့်ကြောင်း ပြ ဆို နိုင်သည့်ခိုင် လုံ သော justification ရှာ မတွေ ...ဘယ်သူ မှ ပေး နိုင် သည် ကို လည်း မတွေ့ရ ...
ဘိုင်သဝေး....အိမ်ထောင်းရေး ဖောက် ပြန် သူ အမျိုး သမီး များကို ကိုယ် တစ် ပိုင်းမြေ မြုပ် ပြီး ခဲ နှင့်မသေမချင်း ပေါက်သတ် ခြင်း နှင့်သူ ခိုးကို လက် ဖြတ် ခြင်းတို့ ကို Islamic Law မှ ပယ် ဖျက် ပေး လျှင် မွတ်စလင်တွေ ကို လူ လို ဆက် ဆံ ဖို့စဉ်း စားမည်....
မွေးထားတဲ့မိဘကိုအားနာရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုပြင်ဖို့ကောင်း တယ်။ မှန်တာပြောရင်တောင် ကိုဇော်မျိုး ပြောရင် လက်မ ခံဘူး။